Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » IMEX America: Kulungile ukubuya!
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-IMEX America 2021 Ukuvala iNkomfa yeendaba
Emva kweveki exakekileyo echazwe yimvakalelo enzima yokuba "kulungile ukubuya," uSihlalo we-IMEX uRay Bloom kunye ne-CEO uCarina Bauer badityaniswa kwi-podium ye-IMEX yaseMelika yokuvala inkomfa yeendaba nguSteve Hill, i-CEO kunye noMongameli we-LVVA; UPaul VanDeventer, uMongameli kunye ne-CEO yeMPI; kunye noStephanie Glanzer, iGosa eliyiNtloko lezeNtengiso kunye noSekela Mongameli oPhezulu kwi-MGM Resorts International.
Bangaphezu kwama-3,300 abathengi ababekho kwi-IMEX America kule veki uninzi lwabo lubambe abathengi.
Umnyhadala owawuseMandalay Bay eLas Vegas ubone iinkampani ezingaphezu kwama-2,200 ezibonisa amazwe angaphezu kwama-200.
Kwakukho malunga ne-50,000 yokuqeshwa okwenziwe ngengxelo ebonisa umsitho ovelise ishishini elomeleleyo kubabonisi.
URay uphawule uhlelo lwe-10 lwe IMEX yaseMelika ngengxelo yakhe yenkcukaca yamanani oshishino evekini: “Ngaphezu kwama-3,300 abathengi bebelapha kule veki, uninzi lwabo lubambe abathengi. Siphinde saba neenkampani ezibonisayo ezingaphezu kwama-2,200 ezimele amazwe angama-200 nangaphezulu. Ukuqeshwa bekujikeleze i-50,000 kwaye ingxelo ibonisa ukuba bavelise ishishini eliqinileyo kubabonisi. Enye into ephawuleka kumgangatho weshishini kunye nee-RFPs ezisuka ekuqeshweni ngabathengi abahambayo. ”
UCarina wanda phezu kwe imfuno yoshishino ebonakaliswe phakathi evekini. “Bekufudumez’ intliziyo kwaye kwavuyisa ukuva amabali amaninzi abuyayo. I-London & Partners, abahlobo bethu apha namhlanje, i-LVCVA, kunye nezinye ezininzi, kubandakanywa amaqela ehotele afana ne-Mandarin Oriental, bonke baye bachaza imibhobho yoshishino eqinile ukuya kwi-Q3 kunyaka ozayo kunye no-2025. Le veki ye-IMEX isinike sonke isizathu sokukholelwa ukuba ikamva loshishino liqaqambile.”
Imo yegumbi yayichwayitile njengoko ilungu ngalinye lephaneli labelane ngamabali empumelelo kwaye lanika imbeko ukomelela kunye nokuguquguquka kushishino lweziganeko zoshishino lwehlabathi, njengoko kubonisiwe kwi-IMEX yaseMelika ngomlinganiselo omkhulu kunye nobubanzi bomboniso walo nyaka emva kokusondela kwisibini. iminyaka yokuvalwa kweshishini.
Ukusungula kunye nenyathelo
Njengamaxesha onke, i-IMEX yaseMelika ibonelela ngobutyebi bamanyathelo kunye namathuba ukongeza kwishishini lobuso ngobuso. Kule veki babandakanye iiseshini zemfundo ezingaphezu kwama-200, iingoma ezintsha zemfundo, iLali entsha yabantu kunye nePlanethi enendawo yeziqhamo "engafanelekanga" kunye nemifuno yejusi yemifuno kunye neeseshini zokuzinza, iTech Therapy Area, kunye nenkqubo yempilo yemihla ngemihla ebonisa #IMEXrun yemveli. kusasa ngoLwesithathu.
Iingcali nezithethi ezikumgangatho wehlabathi, imfundo yobungcali kumashishini, kunye nabaphathi bemibutho kunye nee-arhente, kunye neendibano zocweyo kunye neenkqubo zabafundi kunye nabafundisi, bagqibezela iveki yomanyano oluxakekileyo.
UCarina ushwankathele: “Njengabaninzi benu, iqela lethu lisebenze ixesha elide kwaye nzima ukwenza i-IMEX America 2021 ibe neziqhamo. Sonwabile sisazi ukuba ubukele, ulindile kwaye uzimisele ebomini kuba ithetha lukhulu kwishishini lethu lehlabathi. Besingenakuyenza ngaphandle kwakho. Okona kubaluleke kakhulu sikwenzela wena kuba sikholelwa ngamandla kwixabiso lezoqoqosho kunye nempembelelo entle yolu shishino kwihlabathi liphela. Le veki ibonakalise ukuba – ngokudibeneyo – sibuyile, kwaye sibuyele kushishino. Nokuba ubungekho egumbini, siyazi ukuba ubuyiva ukude.”
Imihla ye-IMEX America 2022 yaqinisekiswa ngo-Okthobha 11 - 13, kunye ne-Smart ngoMvulo, inikwe amandla yiMPI ngo-Okthobha we-10.